ကလိုစေးထူး: February 2008
Posted by ကလိုစေးထူး at 10:18 PM4comments
Posted by ကလိုစေးထူး at 9:12 PM 1 comments
စာရေးကလေး မောင်သွင်ယုတယောက် ခရီးသွားရမည်မို့ အိပ်ရာမှ စောစီးစွာ နိုးနှင့်နေ၏။ ဆောင်းအကုန် ဖြစ်လင့်ကစား နွေရနံ့ မပီသေးတော့ မနက်ခင်းက အေးတုံ့ မအေးတုံ့ဟန်…။
`ကွိုင့် ဘိန်း၊ ကွိုင့်ဘိန်း´
အိမ်ရှေ့မှ ဖြတ်သွားသော မုန့်သည်လေးရဲ့ အဲဒီ အသံကို ရန်ကုန်က ပြောင်းခါစတုန်းကတော့ ဘာမှန်းမသိ။ နောက်တော့မှာ ဒါက မွန်လို ဘိန်းမု့န်လို့ ခေါ်မှန်း သိရသည်။ `ကွိုင့်´ ဆိုတာ မုန့်၊ ဒီတော့ ဘိန်းမုန့်ကို ကွိုင့်ဘိန်း။ လေသံဝဲ၀ဲ တလုံးတခဲနဲ့ မုန့်သည်လေးရဲ့ အသံက တမျိုးတော့ ချစ်စရာကောင်းလှသည်။
ခြံထောင့်က ရေတွင်းလေးဆီကို ရောက်တော့ ၀ါးရုံပင်ငယ် အုပ်မိုးခံရတဲ့ ရေတွင်းကလေး တ၀ိုက်မှာ ၀ါးရွက်ချွန်ချွန်တွေက အဖွေးသား ကျဲပြန့်နေ၏။ ရေတွင်းထဲမှာလဲ ၀ါးရွက်တချို့…။ မောင်းတက်ကို ဆွဲချပြီး ခပ်လှမ်းလှမ်းက စဉ့်အိုးထဲကို ရေငင်ထည့်လိုက်သည်။ ရေတွင်းလေးရဲ့ သဘာဝကိုက လူတွေရဲ့ သဘောမနောကိုများ အကြိုက်ဆောင်နေသလား မသိ၊ အခုလို မနက်စောစောဆိုရင် ရေတွေက နွေးနေပြီး ပူပြင်းတဲ့ နွေနေ့လည်မှာတော့ အေးမြနေတတ်သည်။ အခုလဲကြည့်လေ…။ ဆောင်းလက်ကျန် အအေးဒဏ်ကို သက်သာစေရော့ထင့်…၊ တွင်းရေ က နွေးနွေးလေး။ တဗွမ်းဗွမ်းနှင့် အားရပါးရ လောင်းချိုးပစ်လိုက်သည်။
`သားကြီးရေ၊ သိပ်အကြာကြီးတော့ ချိုးမနေနဲ့နော် သင်္ဘောဆိပ်ဆင်းဖို့ နောက်ကျနေအုံးမယ်´
အိမ်ပေါ်ကနေ စိတ်မချဟန် လှမ်းအော်ပြောသည့် မေမေ့ကို `ဟုတ်ကဲ့´ ဟု ဗလုံးဗထွေး လေသံဖြင့် ပြန်အော်ရသေးသည်။
မောင်သွင်ယု တယောက် မြို့နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနမှာ စာရေးကလေး ၀င်လုပ်နေသည်မှာ သိပ်တော့ မကြာလှသေးပါ။ ဆယ်တန်းအောင်ခါစ၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေ ဆက်တက်ဖို့ကလဲ နှစ်နှစ် ထပ်စောင့်ရမည့် ကြားကာလမှာ ဒီရုံးမှာ အလုပ်ဝင်ဖြစ်နေခြင်းပင်…။ မေမေကတော့ လုပ်အားပေး ကျောင်းဆရာ ဖြစ်ဖြစ် ၀င်လုပ်စေချင်ပေမယ့် မောင်သွင်ယုကတော့ ၀ါသနာ မပါလှတာနှင့်ပင် ကျောင်းဆရာ မဖြစ်ခဲ့။
သူတို့ ရုံးက လချုပ်စာရင်းတွေကို လကုန်ချိန်တိုင်းမှာ ပြည်နယ်ရုံးရှိရာ ဘားအံကို သွားပို့ရလေ့ရှိသည်။ ခါတိုင်းဆိုရင်တော့ စာရေးကြီး ဦးသန်းတင်က ဒီတာဝန်ကို ယူနေကျ…။ ဒီလတော့ ဦးသန်းတင်က ကျန်းမာရေး မကောင်းတာကြောင့် သူ့ကို စေလွှတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်၏။
မောင်သွင်ယု သင်္ဘောဆိပ်ကို ရောက်တော့ မနက် ၈ နာရီ ခွဲလုပြီ။ နေရောင် ဖြိုးဖျဝါမှုန်မှုန်အောက်က မြစ်ကမ်းစပ်မှာတော့ သင်္ဘောတစီးက အခန့်သားဖြင့် ကမ်းကပ်ထားလျက်သား။ သင်္ဘောနာမည်က တမျိုးတော့ ဆန်းသည်။ `ဆင်တော်´ တဲ့။
ရှောက်သီး၊ သံပုရာသီး အိတ်တွေက သင်္ဘောဝမ်းထဲမှာ မနေ့ညနေကတည်းက ရောက်နှင့်နေလောက်ပြီ။ ကွမ်းသီးအိတ်တွေတချို့ကတော့ အလုပ်သမားတွေက အခုအချိန်ထိ ထမ်းနေကြဆဲ…။ သင်္ဘောဆိပ်ကို ဆင်းလာကြသူ ခရီးသည်တချို့ကတော့ လမ်းလျှောက်ရင်းတချို့၊ ဆိုက်ကားဖြင့် တချို့၊ တချို့လည်း မြင်းလှည်းသံ တချွင်ချွင်ဖြင့်…၊ ငွေကြေးတတ်နိုင်သူ တချို့ကတော့ ဆိုင်ကယ်လေး တဖျောဖျောမောင်းလို့ လိုက်ပို့ပေးသူတွေနဲ့…။
သင်္ဘောပေါ် လှမ်းတက်လိုက်သည်နှင့် ရှောက်သီး၊ သံပုရာသီး အနံ့က လှိုင်ခနဲ ဆီးကြိုနေ၏။ စက်သံတွေ တရစပ် ဆူညံတတ်လေ့ရှိသော အောက်ထပ်မှာ မစီးချင်တာနှင့်ပင် အပေါ်ထပ်ကို တက်လာလိုက်သည်။ သင်္ဘောအပေါ်ထပ် ပဲ့ခန်းက ထမင်းဆိုင် ပိစိကွေးလေးရှေ့က ခုံတန်းလေးမှာ ၀င်ထိုင်ရင်း လက်ဖက်ရည် ပေါ့ဆိမ့် တခွက် မှာလိုက်သည်။ ကိုးနာရီခွဲလျှင် ထွက်တော့မည့် ဆင်တော် သင်္ဘောက တပ်လှန့်သံအလား ဥသြသံ တချက် ထွက်လာသည်။
မဟုတ်တော့ဘူး ထင်သည်။ နာရီကို ကြည့်လိုက်တော့ မနက် ကိုးနာရီ ခွဲကျော်လို့ ဆယ်နာရီပင် ထိုးလုလု ဖြစ်နေပြီ။ သင်္ဘောက ဘာလို့ မထွက်သေးတာပါလိမ့်။ သင်္ဘောပေါ်က ခရီးသည်တချို့က ကမ်းပေါ်ကို လည်တဆန့်ဆန့်ဖြင့် တခုခုကို စောင့်မျှော်နေသလိုလို…၊ ဘယ်လိုပါလိမ့်…။
အတန်ငယ် ကြာတော့မှ သင်္ဘောမထွက်ဖြစ်ရသေးသည့် အဖြေကို သိရတော့၏။ နယ်မြေခံတပ်က အရာရှိတယောက် လိုက်မှာမို့လို့ သင်္ဘောကို မထွက်သေးဖို့၊ အနှီအရာရှိ ရောက်တဲ့အထိ စောင့်ပေးဖို့ ကုန်တင်ကုန်ချရုံးက အိတ်ချိန်းဖုန်းကို လှမ်းမှာထားသတဲ့…။ ဘာမှ မထူးဆန်းတော့ ဖြစ်နေတဲ့ ဒါမျိုးက မကြာခဏ ကြုံရလေ့ရှိပေမယ့် လူတယောက်ကို လူတွေအများကြီးက စောင့်နေရတာကတော့ အဆင်မပြေလှ…။
ဆယ်နာရီ ဆယ့်ငါးမိနစ် သာသာလောက်မှပင် သင်္ဘောဆိပ်ကို စစ်ကားတစီး ပေါက်ချလာတော့၏။ လာပါပြီ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ကလေး၊ စတိုင်လ်က ခပ်ထွားထွား၊ စစ်ယူနီဖောင်းအခန့်သားနှင့် သူ့နောက်မှာတော့ စစ်ရောင် သံသေတ္တာတလုံးကို ရဲဘော်ကလေး နှစ်ယောက်က တဖက်စီကနေ ဆွဲလို့ လိုက်လာကြသည်။ သံဃာတော်တွေနဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေအတွက် ဦးစားပေးလေ့ရှိတဲ့ သင်္ဘောဦးခန်းကို သူတို့တွေ ၀င်သွားပြီးတော့မှပင် ဆင်တော်သင်္ဘောရဲ့ စိတ်ဒုံးဒုံးချဟန် ဥသြသံက အောင်မြင်စွာ ထွက်ပေါ်လာတော့သည်။
တကယ်တော့ သူတို့ မြို့ကလေးကနေ မော်လမြိုင်အထိကို ဒီ ရေလမ်းကြောင်း တခုတည်းကိုသာ အားကိုးနေခဲ့ရတာ နှစ်ပေါင်း အတော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ အရင်ကဆိုရင် ပြည်သူပိုင် သင်္ဘောက အခုလိုတောင် နေ့စဉ်ရက်ဆက် မပြေးဆွဲပေးနိုင်ခဲ့ပါ။ တပတ်မှာမှ အင်္ဂါနေ့နှင့် သောကြာနေ့တို့ နှစ်ရက်တည်းသာ သူတို့ မြို့ကို သင်္ဘောရောက်နိုင်၏။ ကြားရက်တွေမှာတော့ ပုဂ္ဂလိကပိုင် မော်တော်ဘုတ်တွေနဲ့ သွားလာရသည်။ တခါတလေ မော်တော်ဘုတ်မရှိတဲ့ ရက်တွေမှာဆိုရင် ဒေသအခေါ် `ခွေးတူဝက်တူ´ ဆိုတဲ့ ပဲ့ချိတ်မက၊ မော်တော်ဘုတ်မကျသည့် ရေယာဉ်ငယ်လေးတွေကို အားကိုးရသည်။
ရေသားကြည်ပြာပြာတွေကို တဖွားဖွားထိုးခွဲရင်း မြစ်ပြင်ထက်မှာ ပြေးလွှားနေတဲ့ ဆင်တော်က နှစ်နာရီခန့် ခရီးဆက်ပြီးချိန်မှာ အတန်ငယ် မောပန်းဟန်ဖြင့် ဆိပ်ကမ်းတခုကို ကပ်သည်။ ထမင်းဆိုင်ငယ်တချို့ အစီအရီ ကမ်းစပ်ကနေ သစ်သားဆိပ်ခံတံတား တခု မြစ်ထဲကို ခပ်ငေါငေါ ထွက်လျက်သားဖြင့် `သံပုရာ´ ရွာ ဆိပ်ကမ်းက မျှော်တော်ဇောဖြင့် မောနေရော့သလားတော့ မသိ။
ဈေးသက်သက်သာသာ၊ အရသာကောင်းကောင်းဖြင့် ထမင်းထုပ်တွေ ဒီဆိပ်ကမ်းမှာ ရနိုင်တာမို့ သင်္ဘော ကမ်းကပ်သည်နှင့် ခပ်သွက်သွက်ဆင်းပြီး ထမင်းထုပ်ဝယ်ရသည်။ အမယ်…၊ ကမ်းပေါ်ကနေ ကျည်တောက် ခပ်ရွယ်ရွယ် နှစ်လုံးကို ထမ်းပိုး ဟိုဘက်ဒီဘက်ချိတ်ရင်း လူတယောက် ခပ်သွက်သွက် ဆင်လားပါလား။ ထမ်းပိုးထိပ်မှာ ၀ါးကျည်တောက်ခွက်တွေက တိုးလို့တန်းလန်း ပါလာသေးသည်။ ဒါမျိုးတော့ မောင်သွင်ယုတို့ ဘယ်အလွတ်ပေးလိမ့်မတုန်း…။
အမြုပ်တွေ ခုန်ဆွဆွဖြစ်နေတဲ့ ထန်းရည် တခွက်က ကမန်းကတန်း သောက်ရလို့လား မသိ၊ အရသာ ပိုရှိနေသလိုလို ချိုပြင်းရှတတက အမိုက်စား…။
သံပုရာရွာက ပြန်ထွက်တော့ နေ့လည် ၁၂ နာရီ ထိုးစ…။
တရိပ်ရိပ်နဲ့ ပြေးလွှားနေတဲ့ ကမ်းစပ်က အပင်တွေကို ကြည့်ရင်း မောင်သွင်ယု တယောက် မှေးခနဲ ငိုက်မြည်းစ ပြုလာခိုက်…။
`ကဲ… ကဲ၊ မှတ်ပုံတင်လေးတွေ ထုတ်ထားမယ်နော်´
အောက်ပိုင်းမှာ ကာကီရောင် ဘောင်းဘီဝတ်ထားပြီး အပေါ်မှာ အရပ်ဝတ်တွေနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်က အထက်ပါအတိုင်း အော်ရင်း သင်္ဘောပေါ်မှာ လှည့်လည်တော့သည်။
မှတ်ပုံတင်စစ်လိုက်ခြင်းဟာ ဒီသင်္ဘောရဲ့ လုံခြုံရေးကို ဘယ်လောက်အထိ အကာအကွယ်ပေးနိုင်လဲ၊ လူဆိုးတွေက မှတ်ပုံတင် မကိုင်လို့လား၊ ဒါမှမဟုတ် လူကောင်းတွေမှာ မှတ်ပုံတင် မရှိရင်ရော ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ မောင်သွင်ယု တွေးနေမိသည်။
ဟော…၊ လက်ရန်းနားမှာ ထိုင်နေတဲ့ ကောင်လေး တယောက်…။ မောင်သွင်ယုနဲ့ ရွယ်တူလောက်ပဲ ရှိလောက်မည်။ မှတ်ပုံတင် မေးတော့ အိတ်ထဲ ဟိုနှိုက်ဒီနှိုက်ဖြင့် အကြံအိုက်နေတဲ့ ပုံစံ။ ကာကီရောင် ပုဂ္ဂိုလ်တယောက် `လိုက်ခဲ့´ ဆိုတဲ့ သဘောဖြင့် လက်ယပ်ပြီး Escort ခန်းထဲ ခေါ်သွားသည်။ နာရီဝက်လောက် နေတော့ ကောင်လေး ပြန်ရောက်လာသည်။
စပ်စပ်စပ်စုစု နိုင်လှသည့် အဒေါ်ကြီးတယောက်က ကောင်လေးကို လှမ်းမေးသံ ကြားရတော့ ကောင်လေးက လက်ငါးချောင်း ထောင်ပြသည်။ ဘယ်လောက်လဲတော့ မောင်သွင်ယု မသိ။ ငါးဆယ်လား၊ ငါးရာလား၊ ငါးထောင်လား။
ချောင်းနှစ်ခွ ဆိပ်ကမ်းကိုရောက်တော့ နေ့လည် နှစ်ချက်တီး ကျော်ပြီ။
ချောင်းနှစ်ခွရွာကတော့ အသီးအနှံနှင့် ပတ်သက်လို့ ဈေးချိုသည့်၊ လတ်ဆတ်သည့် နေရာမှာ နာမည်ကြီးပင်။ အခုလဲ ကြည့်လေ၊ သခွားသီး အလုံးထွားထွားတွေ၊ ခ၀ဲသီး၊ ဗုံလုံသီးသည်တွေက သင်္ဘောပေါ်တက်ရောင်းရင်း ဈေးခေါ်ကြသည်မှာ သင်္ဘောတခုလုံး စီစီညံနေတော့သည်။ ထန်းသီး လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်တွေလဲ လိုက်ရောင်းနေတာ တွေ့ရသေးသည်။
ချောင်းနှစ်ခွမှာတော့ သင်္ဘောရပ်တာ နည်းနည်း ပိုကြာသည်။ ချောင်းနှစ်ခွပြီးရင်တော့ ဦးလေး…ဆိပ်ကမ်း…။
ကျိုက်မရော ရောက်ရင်တော့ မောင်သွင်ယု ဆင်းရမည်။ မော်လမြိုင်အထိ ဆက်စီးသွားရင် မိုးအတော်စုံးစုံးချုပ်မှ ရောက်မှာမို့ ကျိုက်မရောမှာ ဆင်း…၊ ပြီးရင်တော့ လိုင်းကားဖြင့် မော်လမြိုင်ကို ဆက်သွားပေါ့။
မော်လမြိုင်ရောက်ရင်တော့ တည်းနေကျ `စည်းစိမ်ရှင်´ တည်းခိုခန်းမှာ အခန်းလွတ်တခုခုတော့ ရနိုင်လောက်သေးပါရဲ့။
(ကျနော့်ကို ငယ်ငယ်ကဆို ဖေဖေမေမေက အမြဲ ကြည်စယ်လေ့ရှိတာ တခုရှိတယ်။ အမြှောက်ကြိုက်တဲ့။ အခုလဲ အဲဒီလို ဖြစ်နေပြီထင်ပါရဲ့။ ကျနော့်ကို အားပေးကြတဲ့ မိတ်ဆွေတချို့ရဲ့ အမြှောက်ကောင်းမှုနဲ့ ကျနော် အခုရက်ပိုင်းတွေမှာ သရုပ်ဖော် စာလေးတွေကို ပိုအရေးစိတ်သလို ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီစာလေးတွေ ရေးနေရတာကလဲ စိတ်ကို ပိုပြီးတော့ အေးချမ်းစေသလို ဖြစ်နေလို့ ဖတ်သူတွေအနေနဲ့ ရိုးအီသလိုဖြစ်နေရင်တော့ ခွင့်လွှတ်ကြပါလို့…။)
Posted by ကလိုစေးထူး at 10:05 PM5comments
Posted by ကလိုစေးထူး at 8:53 PM4comments
`နိုင်ငံခြား သွားမယ်ဆိုရင်´ ပို့စ်တွေကို ဖတ်မိတဲ့ စင်္ကာပူက မချိုက ကျနော့်ဆီကို အီးမေးလ်ပိုပြီး သူရဲ့ စင်္ကာပူရောက် အတွေ့အကြုံတွေကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ရေးသား ဝေမျှ ပေးပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။
တကယ်တော့ အဲဒီ ပို့စ်တွေကို တင်ဖြစ်ဖို့ စိတ်ကူးက ကျနော်က စတင် ရခဲ့တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီ ပို့စ်တွေမှာ ကျနော့် မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေ အတော်များများက မိမိရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားကို သွားမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုဘယ်ပုံ ပြင်ဆင်သင့်တယ်၊ ဘာတွေ တွေ့ကြုံရနိုင်တယ်ဆိုတာကို အားတက်သရော ဆွေးနွေးပေးကြလို့ အတော်လေးကို မြိုင်မြိုင် ဆိုင်ဆိုင် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီပို့စ်တွေရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့ ကျနော် စဉ်းစားမိတာ တခုကတော့ ကျနော်တို့တွေလို ပြည်ပကို ရောက်နေသူတွေရဲ့ လုပ်ငန်းခွင် အတွေ့အကြုံ၊ အလုပ်ရှာဖွေရတဲ့ အတွေ့အကြုံ၊ အခက်အခဲ အစရှိတာတွေကိုပါ မိမိ ရောက်နေကြတဲ့ နိုင်ငံအလိုက် ကိုယ့်အတွေ့အကြုံကို ကိုယ် တင်ပြဆွေးနွေးရင် ပိုလို့ ပြည့်စုံမလား ဆိုတာပါပဲ။
ဒါကြောင့် ပထမဆုံး ပို့စ်မှာတုန်းကလိုပဲ မေးခွန်းလေးတွေနဲ့ အတူ အတွေ့အကြုံတွေ ဖလှယ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ကျနော့်ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကိုလဲ နောက်ပိုင်းမှာ ကွန်မန့်အဖြစ် ဆက်လက် တင်ပြပါမယ်။
ကျနော် ဖြေကြားပေးစေချင်တဲ့ မေးခွန်းတွေကတော့…
(၁) အခု ရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံမှာ လက်ရှိ ဘာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေရပါသလဲ။ အဲဒီ အလုပ်ရဖို့ကို ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့ရတယ်၊ အခက်အခဲတွေ ဘာတွေ ရှိခဲ့တယ် ဆိုတာကို ဆွေးနွေးစေချင်ပါတယ်။
(၂) အခု လက်ရှိအလုပ်ကရော သင့်ရဲ့ မျှော်မှန်းချက်ကို အတိုင်းအတာ တခုအထိ အထောက်အကူ ပြု ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါသလား။ ဥပမာ- လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်နဲ့ လက်ရှိ လုပ်နေရတဲ့ အလုပ်က တထပ်တည်း ကျပါရဲ့လား။
(၃) အခု လက်ရှိရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံမှာ မြန်မာလူမျိုး အလုပ်သမားတွေ ကြုံရလေ့ ရှိတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ဆွေးနွေးစေချင်ပါတယ်။
(၄) ဘာသာစကား မတူညီမှုကြောင့် ဆုံးရှုံးရလေ့ရှိတဲ့ အလုပ်အကိုင်ကောင်းတွေ အကြောင်းကို တွေ့ကြုံမိသမျှ ရေးသားပေးစေချင်ပါတယ်။
(၅) မြန်မာနိုင်ငံကနေ ပြည်ပထွက် အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသူတွေ အတွက် အကောင်းဆုံးသော အကြံဉာဏ်ကို မိမိတွေ့ကြုံဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ ယှဉ်ပြီး ရေးသား အကြံပြုစေချင်ပါတယ်။
အထက်ပါ မေးခွန်းတွေကို မည်သူမဆို အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပဲ ဖြစ်စေ၊ မြန်မာဘာသာနဲ့ပဲ ဖြစ်စေ ဖြေကြားပေးပြီး မိမိရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ဝေမျှပေးစေလိုပါတယ်။ ကွန်မန့်မှာ ရေးရတာ အခက်အခဲ ရှိလို့ ကျနော့်ဆီကို အီးမေးလ်နဲ့ ပေးပို့လိုသူတွေကတော့ klosayhtoo@gmail.com ကို ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
ကျနော့်ဆီကို ပေးပို့လိုက်တဲ့ မချိုရဲ့ စင်္ကာပူရောက် အတွေ့အကြုံတွေကို အောက်မှာ ထပ်ဆင့် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Thank you for allowing me to share my knowledge. I had read your post “Going to foreign land” and also read the letter from “Ma Mar La”. She contributes very useful info about Japan and America. I just want to add some for Singapore.
I am working in Singapore for 13 years and hope that my contribution will be useful for our own country people.
I do not have Burmese font. Please allow me to write in English.
This is only general information for coming to Singapore.
(1) Apply Visa
You may apply Visa at Singapore Embassy in Myanmar. Usually, you can get one month multi-entry visa.
(2) Immigration check point at Singapore air port
Upon arriving at Singapore airport, immigration officer will give you reasonable length of stay, depends on visa validity, return air ticket, etc.. Usually2weeks or one month. This is called social visit pass (SVP).
(3) Stay in SG during social visit pass
During social visit pass (SVP), you may try to get job via news paper, job ad web or agents. In SG, the law is very hush for over-stayer. That’s why must be very careful of SVP validity. Before expire of SVP, need to apply extension on line at immigration web. Depends on your data, you will get final extension one month or sometimes you may not get any extension. Once your SVP is expired you must leave the country.
(4) Hunting Job
Basically2types of work pass.
· work permit for general worker (education is not necessary)
· S pass, Q pass and P pass for professional (Engineer, Accountant, Nurse..etc )
I am not sure about ‘work permit’. Generally they go-through by agent before they enter to SG. I will gather more info and write to u.
S pass, Q pass and P pass for professional ;
For hunting job, your certificate is not 100% majority. Employer just wants to know what you can do practically in your professional field. Language skill also important.
Hunting job is all depends on your own ability and luck.
In SG,alots of Burmese working as professional including ladies, mostly in Engineering field. Alsoalots of people going back without getting job. Therefore very hard to shown in % of success.
(5) Apply work pass
If you secure the job during SVP, your company will apply work pass for you. Work pass types are varies depends on salary range. Processing time is about 3weeks. If your SVP is expired during processing, u may get extension.
(6) Approval of work pass
Approval of work pass depends on ;
Education (Diploma or Degree)
Job Nature (must be relevant to education and work experience)
Copy of Education Certificates and work experience testimonials must be submitted. Also, approval of work pass depends on company performance.
If work pass is approved, you are granted to work in your company for2years and extendable. Those people with salary S$ 2500 and above can bring family with children under 21yrs old. You may apply “Permanent Resident” after work pass is issued. Approval is case by case basic and own merit.
(7) Rejection of work pass
If work pass application is rejected, your company may submit appeal. If rejected again, you may look for another job and your SVP will not be extended and you have to leave SG. Alternatively, you may try to get student pass from private school.
This is only general info for Burmese passport holder and may not be applicable for all circumstances.
If my contribution is not complete or mislead, I welcome the correction.
Posted by ကလိုစေးထူး at 10:39 PM 10 comments
Posted by ကလိုစေးထူး at 9:27 PM7comments
Posted by ကလိုစေးထူး at 10:23 PM3comments
Posted by ကလိုစေးထူး at 6:51 PM5comments
လွန်ခဲ့တဲ့ တလကျော်က ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်က မိတ်ဆွေ တယောက်ရဲ့ အစပျိုးပေးမှုကြောင့် ပြည်ပရောက် မြန်မာတွေရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ဝေမျှကြတဲ့ `နိုင်ငံခြားသွားမယ်ဆိုရင်´ ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးကို တင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာပြည်က အဲဒီ မိတ်ဆွေလေးရဲ့ မေးခွန်း ၈ ခုကို ကျနော်နဲ့ လက်လှမ်းမီရာ ပြည်ပရောက် မိတ်ဆွေတွေကို လိုက်လံ ဖိတ်ကြားရင်းနဲ့ အဲဒီပို့စ်ကို ပုံဖော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့တော့ ကျနော့်ဆီကို စာတစောင် ရောက်လာပါတယ်။ ကျနော့်ဘလော့ဂ်ကို လာဖတ်မိတဲ့ မမာလာ ဆိုတဲ့ ပြည်ပရောက် မြန်မာအမျိုးသမီး တဦးဆီကပါ။ မမာလာက `နိုင်ငံခြားသွားမယ် ဆိုရင်´ ပို့စ်ကို ဖတ်မိဟန် တူပြီးတော့ သူကလည်း သူ့အတွေ့အကြုံပေါ်မှာ အခြေခံတဲ့ အကြံပြုဆွေးနွေးချက်ကို ကျနော့်ဆီ ပေးပို့လာတာကြောင့် သူ့ရဲ့စာကို ပြန်လည် စာရိုက်ပြီးတော့ တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေဟာ သူရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ နေရာဒေသတွေမှာ နေထိုင်ခဲ့ဖူး၊ နေထိုင်နေဆဲ တခြားသော မြန်မာတွေနဲ့ ကွာခြားကောင်း ကွာခြားနိုင်တာ တချို့ ရှိနိုင်ပေမယ့် နိုင်ငံခြားထွက်လိုသူ ရွှေပြည်ကြီးက မြန်မာတွေအနက် တယောက်ယောက်က ဖတ်မိလို့ မှတ်သားစရာ အချက်အလက် အနည်းငယ်မျှ ရသွားရင်ပဲ အကျိုး တစုံတရာ ရှိလိမ့်မယ်လို့ ယူဆတာကြောင့် Scan ဖတ်ပြီး ပေးပို့လာတဲ့ လက်ရေးမူတွေကို ကျနော် စာပြန်ရိုက်ပြီး တင်ပြတာပါ။ အဲဒီ စာမူထဲက အာဘော်တွေ အားလုံးဟာ မမာလာရဲ့ အတွေ့အကြုံ အာဘော်များသာ ဖြစ်ကြောင်းပါ…။
တကယ်တော့ ဒီနေ့ တင်ဆက်မယ့် ပို့စ်ဟာ ကျနော့် ဘလော့ဂ်ရဲ့ ပို့စ်(၃၀၀)မြောက်ပါ။ ပထမတော့ ၃၀၀ပြည့်မှသည် ရှေ့ဆက်လို့ဘာတွေ ဘယ်လိုရေးမယ်၊ ဘယ်လိုရှေ့ဆက်မယ် ဘာညာ သာရကာလေးများ ရေးမလား စိတ်ကူးခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုလို တင်ဆက်လိုက်တာက ပို အကျိုးရှိမယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆတာကြောင့်….။ ကဲ… မမာလာရဲ့ စာကို ဖတ်ကြည့်ကြပါစို့…။
အင်မတန် ရှည်လျားတဲ့ အဖြေစာရွက်မို့ ဖြတ်ညှပ်ပြီးမှ ထည့်ချင်လဲထည့်ပါ။ မထည့်ချင်လဲ နေပါ။ မေးခွန်းတွေ တွေ့လို့ ကျွန်မအတွေ့အကြုံနဲ့ လက်လှမ်းမှီသလောက် ဖြေရင်း မမျှော်လင့်ဘဲ ရှည်သွားတာပါ။ ကျွန်မရဲ့ ရည်ရွယ်ရင်းကတော့ နိုင်ငံခြားသွားမဲ့လူတွေ ကြိုသိစေချင်တာ၊ ကြိုပြင်ဆင် ထားစေချင်တာပါပဲ။
ကျွန်မ ဂျပန်မှာ (၇)နှစ်၊ အမေရိကားမှာ (၇)နှစ် ရှိပါပြီ။ ကနေဒါမှာ ၂ လနီးပါး နေဖူးပါတယ်။ Singapore ကို ၂ ခေါက် ရောက်ဖူးပါတယ်။ ဒီအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ကျွန်မ ရေးပြခဲ့တာပါ။
ဦးကလိုစေးထူးရဲ့ Blog ကို ဖတ်ဖြစ်တာ ၂ ပတ်လောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဗမာလို မဖတ်ရတာ ကြာတော့ ဖတ်ရင်း ဖတ်လို့ကောင်းတာရယ်၊ ဘာ font နဲ့ တင်လဲတော့ မသိဘူး၊ မြန်မာ font လုံးဝ မရှိတဲ့ Computer က Web ဖွင့်ရင် ဖတ်လို့ရတာရယ်မို့ မကြာခဏ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်ကတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ သတင်းအမှန်တွေကို ဒီလို Blog တွေမှာ ရှာရင်း ဒီ Web ကို တွေ့ခဲ့တာပါ။
ဒီဆောင်းပါးလေးနဲ့ ပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်ရတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မြန်မာ Font က အိမ်က Computer မှာ ရှိပေမဲ့ Speed နှေးလို့ သိပ်လဲ မသုံးဖြစ်ပါဘူး။ အိမ်အလုပ် အရမ်းများတာလဲ ပါပါတယ်။ ရုံးက Computer က Admin Password နဲ့မှ Font ကို Install လုပ်ရတာမို့ ပေးမလုပ်ပါဘူး။ အိမ်မှာ High Speed internet တပ်ပြီးတဲ့အထိ၊ အိမ်အလုပ် ရှုပ်တာတွေ ရှင်းတဲ့အထိ စောင့်ရတာမို့ အခုလို Scan ပဲ ကူးပို့ရတာ တောင်းပန်ပါတယ်။
၁။ နိုင်ငံခြားသွားတဲ့ လူတိုင်းမှာ အဆင်ပြေဖို့ ရာခိုင်နှုန်းအား အကြမ်းဖျင်း အောင်မြင်ဖို့ ၅၀%နဲ့ ရှုံးဖို့ ၅၀%ပဲ ရှိပါတယ်။ ကိုယ်သွားမဲ့ အနေအထားပေါ် မူတည်ပြီး အောင်မြင်မှု ရာခိုင်နှုန်းက ပိုများလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှားကို အလုပ်သွားလုပ်ဖို့ ပွဲစားနဲ့ လုပ်တယ် ဆိုရင်တော့ ပွဲစားအပေါ် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု အပေါ် မူတည်ပါတယ်။ တကယ်စစ်မှန်ပြီး အရောက်ပို့တဲ့ ပွဲစားပေမဲ့ အလုပ်ကရပြီး လခကို အပြည့်ရမရ စာတာတွေကလဲ ရှိနေပါသေးတယ်။ လိမ်ညာတဲ့ ပွဲစားဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေဖို့ ရာခိုင်နှုန်းက နည်းပါတယ်။ လိမ်တဲ့ပွဲစားနဲ့ တွေ့ပြီး ဟိုရောက်မှ ကူညီနိုင်မဲ့သူ တွေ့ရင်တော့ အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ ဂျပန်ကို အလုပ်သွားလုပ် Overstay နဲ့ ဆက်နေ ဆိုတာမျိုးကတော့ ပွဲစားနဲ့ လုပ်တာဆိုရင် လူကရောက်ပေမဲ့ အလုပ်ရဖို့၊ နေဖို့စားဖို့ နေရာရဖို့က အင်မတန် ခက်ခဲပါတယ်။ ၅၀% အောင်မြင်မှာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ ဆွေမျိုး အခံရှိရင်တော့ အောင်မြင်မှု ရာခိုင်နှုန်းက ပိုပြီး များပါတယ်။
ကျောင်းသွားတက်တဲ့ လူတွေကတော့ (ကိုယ့်ငွေနဲ့ Self-Supporting) နဲ့ ဆိုရင်တော့ နဂိုကမှ တတ်နိုင်တော့ ငွေကို ရေလိုဖြုန်းနိုင်ရင် မအောင်မြင်ဖို့ ပြဿနာ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျောင်းက လက်ခံပါတယ်၊ Scholarship က ရောက်မှ လျှောက်ရမယ်၊ ဘာညာဆိုရင် လူခံမရှိရင် (နေဖို့စားဖို့လူ) ဒုက္ခ ရောက်နိုင်ပါတယ်။ အစကတည်းက ကျောင်းက လက်ခံ၊ ငွေ ထောက်ပံ့မှုကလဲ သေချာပြီဆိုရင်တော့ ပြဿနာမရှိနိုင်ပါဘူး။
Visit နဲ့ သွားပြီးမှ အလုပ်သွားမယ်ဆိုရင် (Singapore နိုင်ငံကလွဲလို့) တခြားနိုင်ငံမှာ Work Permit အလုပ်ရဖို့ ဆိုတာ အင်မတန် ရှားပါတယ်။ ဒါတောင် Singapore တောင်မှ Visit နဲ့ လာပြီး အလုပ်လျှောက်တာ ရသေးရဲ့လား သေသေချာချာ မသိပါ။ အမေရိကား၊ ဂျပန် (တိုးတက်သော နိုင်ငံ) တွေမှာ ဗမာပြည်က အလုပ် Experience နဲ့ Work Permit ရဖို့ မလွယ်ပါ။ အဲဒီနိုင်ငံမှာ ကျောင်းပြီးတာတောင်မှ တယောက်ယောက်က ပြောပေး၊ မိတ်ဆက် သွင်းပေးမဲ့လူ မရှိရင် အလုပ်ကောင်း ရဖို့ မလွယ်ပါ။
၂။ ကျောင်းအရင် သွားတက်ရင်း အလုပ်ရှာ ဆိုတာမျိုးကတော့ ကျောင်းတက်နိုင်ဖို့ အရင် ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းတက်ရင်း အလုပ်ကို မိတ်ဆက် ပြောပေးမဲ့လူ၊ ခင်မင်တဲ့လူ သိလာတယ် ဆိုရင် အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မ တွေ့ဖူးတာကတော့ ဂျပန်မှာဆိုရင် Language ကျောင်းတက်တဲ့ လူတွေက ကျောင်းတဖက်၊ ကိုယ် နေဖို့စားဖို့ တဖက် အလုပ်လုပ် (ကျောင်းသားမို့ Par time အလုပ်က ရလွယ်ပါတယ်) ဒါပေမယ့် ပင်ပန်းတဲ့ ဒဏ်မခံနိုင်တာရယ်၊ အိမ်ကို ပြန်မပို့နိုင်တာရယ်ကြောင့် ကျောင်းထွက်ပြီး Overstay အလုပ်လုပ်ရင်း နေကြတာ များပါတယ်။ University တွေကို ကျောင်းတက်ဖို့ လာတဲ့ လူတွေမှာတော့ Course မှာတော့ Professor တွေက အနှေးနဲ့အမြန် ငွေထောက်ပံ့မှုကို ရှာဖွေပေးတော့ နေ၊စားလောက်ရုံ ကျောင်းတက်လို့ လောက်ရုံ ရပါတယ်။ အိမ်ပြန်ပို့ဖို့ သိပ်မလွယ်ပါဘူး။ မြန်မာဆိုရင်တော့ Under Graduate ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Graduate ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Language ကျောင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ Full time ကျောင်းတက်ရင်း မြန်မာလူမျိုးတွေကို ပေးတဲ့ ‘IMAI ZUMI’ Foundation Scholarship က နေဖို့စားဖို့ လောက်ရုံ (၂)နှစ် ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ အဖွဲ့အစည်းကို ဘာပြန် လုပ်ပေးရသလဲ ဆိုတာတော့ မသိပါ။
America မှာ Scholarship နဲ့ ကျောင်းတက်နိုင်ဖို့က အင်မတန် ရှားပါးပါတယ်။ တချို့ Scholarship က ပုံမှန် မဟုတ်ဘဲ တနှစ်မှာ Term (၁) စီလောက်ကို အလှည့်ကျ ပေးတာမျိုးလဲ ရှိပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံက ပေးတဲ့ အစိုးရ Scholarship ကတော့ ပေးတဲ့ နိုင်ငံထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံ မပါပါ။ Australia နိုင်ငံမှာလဲ ၁၉၉၅ နောက်ပိုင်းမှာ အစိုးရက ပေးတဲ့ Scholarship မြန်မာပြည်ကို ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ မရနိုင်တော့ပါ။ ကျောင်းက Foundation က Scholarship ကိုသာ လျှောက်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မ မြင်ဖူးခဲ့သမျှထဲမှာ ကျောင်းသူ တယောက် အမေရိကားကို Scholarship နဲ့ မြန်မာပြည်မှာ ၁၀ တန်းအောင်၊ GCE ဘာညာဖြေပြီး ရတော့ ရောက်လာပါတယ်။ ပ-နှစ်ကတော့ အဆင်ပြေပြီး ဒု-နှစ်မှာ Scholarship မရတော့ပါ။ ကျောင်းဆောင်မှာ နေရတာ ဖြစ်တော့ Part time အလုပ်၊ ဘာညာကလဲ ကားရှိမှ ဆိုတော့ အတော်ဒုက္ခရောက်နေတာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ရန်ကုန်လဲ မပြန်ချင်၊ ဒီမှာပဲ ဆက်နေချင် ဆိုတော့ လူတော်တော်များများကတော့ ဒီက အမေရိကန် နိုင်ငံသား ယောက်ျားရှာယူလိုက်၊ ဆက်နေပြီး (၁-၂)နှစ်လောက် ကျောင်းနားပြီးမှ ပြန်တက် အကြံပေးကြတာ ကြားပါတယ်။ ဒါမှ မဟုတ်ရင် နိုင်ငံရေး ခိုလှုံခွင့် ‘Political Asylum’ အနေနဲ့ Immigration ကို တင်လိုက်၊ ဆက်နေ (၁-၂)နှစ် စောင့်ပြီး ကျောင်းပြန်တက်ဖို့ အကြံပေးကြနဲ့ Scholar က အစကတည်းက ရေရေရာရာ မရှိဘဲ ရောက်လာတော့ ဆုတ်လဲစူး၊ စားလဲရူး ဖြစ်နေတာကို အင်မတန်မှ သနားမိပါတယ်။ အမေရိကန် နိုင်ငံသား (မြန်မာပဲ ဖြစ်ဖြစ်) ယူရအောင်ကလဲ ဗြုန်းခနဲ ဘယ်သူ့ကို ရှာယူရပါ့မလဲ ဆိုတဲ့ ပြဿနာနဲ့ အဲဒီမှာ လူပွဲစား ခေါ်တဲ့ မြန်မာတချို့က ယောက်ျားရှာပေးမယ်။ ဒေါ်လာ ၃ သောင်း ဆိုတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အသက် ၂၀ စွန်းစ အဲဒီ ကလေးမလေး ဘယ်လို စခန်းသွားတယ် ဆိုတာ မသိပါဘူး။
၃။ နိုင်ငံခြား သွားဖို့ မိဘတွေက အိမ်ယာ၊ ကား၊ လက်ဝတ်လက်စား ပေါင်ပြီး သားသမီးကို မပို့သင့်ပါဘူး။ ဥပမာ အိမ်ကို ချန်ထားပြီး ကား၊ လက်ဝတ်လက်စား ရောင်းရင်တော့ မအောင်မြင်လဲ နေစရာလေးတော့ ကျန်ခဲ့မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ သွားရမှာက ဘယ်ပုံဘယ်နည်း သေချာ၊ မသေချာတာပေါ်လဲ အများကြီး မူတည်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မှာ သင်္ဘောတက်တက်တာတောင် ပွဲခ အခု သိန်း(၂၀-၃၀) မက ဖြစ်နေပါပြီ။ အဲဒါ အမေလုပ်သူက သားကို အိမ်ပေါင်ပြီး သင်္ဘောတက်ရအောင် လိုက်လုပ်တော့ သင်္ဘောတက်ခွင့် ရပြီး တနှစ် ရပါတယ်။ ပြန်လာတော့ ပါတဲ့၊ ရတဲ့ငွေ တလဒေါ်လာ (၃၀၀-၅၀၀)က အိမ်ရွေးဖို့ မလောက်တဲ့ အပြင်၊ နောက်တခေါက် ထပ်တက်ဖို့ ၁၀-၁၅ သိန်း ထပ်ကုန်မှာမို့ သင်္ဘောသားဖြစ်တာပဲ အဖတ်တင်ပြီး အိမ်ဆုံးသွားတဲ့လူတွေ တွေ့ဖူးပါတယ်။ ဒါ ဥပမာ ပြောတာပါ။
၄။ နိုင်ငံခြားမှာ ကြုံရမဲ့ ဒုက္ခတွေကိုတော့ နောက်မှပဲ သီးသန့် ရေးပါမယ်။ နိုင်ငံခြား ထွက်တယ်ဆိုတာ အရည်အချင်း ရှိသူရဲ့ ထွက်ပေါက်ဆိုတာ Limit ရှိပါတယ်။ ဘယ်လို အရည်အချင်းလဲ ဆိုတာပါပဲ။
မြန်မာလူမျိုး ဆိုတာ မွေးကတည်းက အိမ်မှာ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းနဲ့ ဘ၀ဖော်အပေါင်းနဲ့ နေကြတာ များပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးတွေပေါ့။ မြန်မာ ယဉ်ကျေးမှုကလဲ မိန်းကလေး အပျိုဆိုရင် အဖော်မပါဘဲ သွားရင် မတင့်တယ်ဘူး ဆိုပြီး အဖော်ပါမှ သွားတာ၊ လာတာမျိုးက နိုင်ငံခြားမှာ ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလူ အကျင့်ပါတဲ့လူဟာ ဗြုန်းခနဲ နိုင်ငံခြားမှာ တယောက်ထဲ ကိုယ့်ကိစ္စကိုယ်လုပ်၊ ကိုယ်မကျွမ်းကျင်တဲ့ ဘာသာနဲ့ ပြောဆို ဆက်ဆံ၊ မသိတဲ့ တစိမ်းနဲ့ မသိတဲ့ System ကို ၀င်လှုပ်ရှားရတော့ အံမ၀င် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို အကင်းပါးပါးနဲ့ လျှင်မြန်စွာ လေ့လာပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြုပြင်ဖို့ လိုပါတယ်။ Adaptation & Quick Learning ဆိုပါတော့။
နောက်တခုကတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ခြေပေါ် ကိုယ်ထောက်ပြီး နဖူးတွေ့၊ ဒူးတွေ့ လုပ်ကိုင်သွားလာ၊ ရှာဖွေပြီ ဆိုတော့ ကိစ္စတခုခု ပြဿနာဖြစ်လဲ စိတ်ဓာတ်မကျဖို့၊ စိတ်ဓာတ် ခိုင်မာဖို့ လိုပါတယ်။ (Strong Personality ပေါ့)။
နောက်၊ သူများကို အားမကိုးဖုိ့၊ သူများ အားကိုးတတ်တဲ့ လူတွေ နိုင်ငံခြားမှာ ဒုက္ခ ပိုရောက်ပါတယ်။ ဘယ်သူကမှ သူများကို ကြာရှည် အားကိုးလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ အားကိုးမိရင် လူလိမ်၊ လူညာနဲ့ ချောက်တွန်းတာ ပိုပြီး ခံရဖွယ် ရှိပါတယ်။ မြန်မာ တော်တော်များများက အဆင်းဘီးတွန်းဖို့နဲ့၊ ချောက်တွန်းဖို့၊ သူများ ကောင်းစားမှာ မနာလိုတဲ့ စိတ်ရှိသူ ရာခိုင်နှုန်း ပိုများပါတယ်။ Independent ဖြစ်ဖို့ပေါ့။
နောက်တခုကတော့ ကိုယ်လုပ်ရင် အောင်မြင်ရမယ်လို့ သာမန် ယုံကြည်ထားဖို့ပါပဲ။ Self-Confident ပေါ့။ တခုခုကို သွားမယ်၊ လာမယ်၊ ၀ယ်မယ်၊ ခြမ်းမယ်၊ ကိုယ်ရဲရဲသာလုပ်၊ မှားလဲ ငွေနည်းနည်းပါးပါး ဆုံးတာကလွဲလို့ အကျိုး မယုတ်နိုင်ရင် ရဲရဲ လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဂျပန်မှာ Self-Confident မရှိလို့ University မှာ Entrance မဖြေရဲ၊ မလုပ်ရဲ၊ မကိုင်ရဲနဲ့ ပြန်သွားရတဲ့ လူတွေ ကြုံခဲ့ရလို့ပါပဲ။
နောက်ဆုံး တချက်ကတော့ မြန်မာများ ပြောတာကို ချင့်ချိန်ပြီး ယုံကြည်ဖို့ပါပဲ။ ကျွန်မသိတဲ့ လင်မယား ၂ ယောက် အမေရိကား ရောက်တာ (၅)နှစ် ပြည့်ပြီ။ သတင်းစား မဖတ်၊ Internet မကြည့်ဘဲ သူများကို လျှောက်မေးပြီး သူများပြောတာပဲ ယုံပါတယ်။ အချီကြီး ထိတာကတော့ US Citizen လျှောက်လွှာကို တင်ဖို့ အရည်အချင်း မှီပါလျှက် မနာလိုတဲ့ လူတွေက မရဘူး ပြောလို့ မလျှောက်ပဲ အတော်ကြာ နေပါတယ်။ ကျွန်မနဲ့ တွေ့တော့ ရပါတယ် ပြောတာကို မယုံပါဘူး။ မနေနိုင်တဲ့ ကျွန်မက Free Consultant Lawyer ထပ်ရှာပြီး မေးပါ၊ ရပါတယ် ပြောမှ Lawyer ကို သွားမေးပြီးမှ ယုံပါတယ်။ အဲဒါက ကိစ္စ တခုထဲပါ။ ကျန်သော ကိစ္စအများကြီးမှာ လုပ်သင့်တာ မလုပ်ဘဲ မနာလိုသူက မရဘူး ပြောတာနဲ့ ထိုင်နေပြီး အမေရိကားမှာ အဆင်မပြေ ဖြစ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။
အချုပ်ကတော့ ရှိရမဲ့ အရည်အချင်းတွေက Good Adaptation and Quick Learning, Strong good Personality, not dependable, self confident and Judgment of Humor ဆိုတာပါပဲ။
၅။ မြန်မာတွေအတွက် နိုင်ငံခြားက အလုပ် အခွင့်အလမ်းကတော့ သူများနိုင်ငံသားထက် စာရင် မြန်မာတွေက ရာခိုင်နှုန်း နည်းပါတယ်။ အဓိကက ဘာသာစကားကြောင့်ပါပဲ။ ဘယ်နိုင်ငံသွားသွား စာရေးစာချီလို အလုပ်မျိုး ရဖို့ မလွယ်တာ အမှန်ပါပဲ။ နိုင်ငံခြား ဘွဲ့ရဖြစ်လဲ ကိုယ်က နိုင်ငံခြားသား ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒေသခံလူတွေကို ဦးစားပေးတော့ နောက်ကျ ကျန်ရပါတယ်။ ကိုယ့်ဘွဲ့က သူများထက်သာ၊ (သို့) ကိုယ်က သူများထက် တော်မှ အလုပ်ကောင်းက တော်ခါ ကျပါတယ်။ ပြီးတော့ အလုပ်ကို မိတ်ဆက်ပေးနိုင်မဲ့ လူရှိရင်တော့ ပိုကောင်းပြီး ရဖို့ သေချာပါတယ်။ ဒီတော့ Language အားနည်းတဲ့ အတွက် အောက်ခြေသိမ်း အလုပ်တွေပဲ ရလွယ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မြန်မာပြည်က ဘွဲ့နဲ့ ဘွဲ့ရအလုပ်ကို နိုင်ငံခြားမှာ ရှာရင် Language မမှီတာနဲ့ပဲ မရတာ များပါတယ်။
၆။ ကျွန်မကတော့ နိုင်ငံခြားသွားတာ အနည်းနဲ့ အများ စွန့်စားတာဖြစ်တယ်၊ သက်သက်သာသာ မဟုတ်ဘူး၊ အခက်အခဲတွေ ရှိတယ် ဆိုတာကို အများကြီး ထောက်ခံပါတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ ကိုယ့်လူမျိုးနဲ့ ဆက်ဆံရတာတောင် အင်မတန် အခက်အခဲ ရှိတဲ့ ကျွန်မ အတွက်ကတော့ သူများနိုင်ငံ၊ သူများလူမျိုးတွေနဲ့ ဆက်ဆံ လုပ်ကိုင်ရတာ လွယ်တာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ကြာလာရင်တော့ သူ့အကြောင်း ကိုယ်နားလည်၊ ကိုယ့်အကြောင်း သူနားလည်မှ ပြဿနာ နည်းပါတယ်။ ဒါတောင် ကိုယ်က ဘယ်လောက်အထိ နားလည်နိုင်တယ်ပေါ်မှာ ပြဿနာ အနည်းအများ ရှိပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေ ယဉ်ကျေးမှု မတူတော့ အခက်အခဲ ရှိပါတယ်။
အဆိုးဆုံး ဥပမာပေးရရင် ၁၉၉၅ ကျွန်မ ဂျပန်ကို ရောက်ခါစ ကျောင်းတက်ဖို့ ကျောင်းဆောင်မှာ နေရပါတယ်။ အဲဒီမြို့က ကျောင်းဆောင်တွေက ရေချိုးခန်းကို Community Center မှာပဲ ရှိပါတယ်။ အဆောင်တိုင်း၊ အခန်းတိုင်းမှာ လုံးဝ မရှိပါဘူး။ Toilet ပဲ ရှိပါတယ်။ ရေချိုးခန်းကလဲ ၂မျိုး ရှိပါတယ်။ Shower room အခန်းနဲ့ OFURO အိုဖုရို လို့ ခေါ်တဲ့ ရေနွေးကန်ထဲမှာ ဆင်းချိုးရတဲ့ အခန်း ရှိပါတယ်။ လူ ၁၀၀ ကျော်နေတဲ့ အဆောင်ပေါင်း ၁၀-၁၅ ဆောင်က လူတွေက Shower ခန်း (၂)ခန်းပဲ ရှိတော့ တန်းစီစောင့်ရပါတယ်။ တခါ ရေချိုးဖို့ (၃)နာရီ အေးအေးချမ်းချမ်း ဆောင်းတွင်းမှာ သံမံတလင်းမှာ နေ့တိုင်း တန်းစီစောင့်ရတဲ့ ဒုက္ခကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ အဲဒီလို မစောင့်ချင်ရင် OFURO အခန်းထဲ လူအများကြီးထဲ ၀င်ချိုးရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ တင်းကျပ်တဲ့ စည်းကမ်းက အဲဒီ OFURO ကို ၀င်မယ်ဆိုရင် တကိုယ်လုံး Nicked ချွတ်ပြီးမှ ၀င်ရပါမယ်။ လူ ရာပေါင်းများစွာ ရှေ့မှာ တကိုယ်လုံး ချွတ်ဝင်ရမဲ့ ကိစ္စကို ကျွန်မ ဂျပန်မှာ ၇-နှစ် နေခဲ့တာတောင်မှ မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ယဉ်ကျေးမှု မတူတာ ပြောတာပါ။
၇။ နိုင်ငံခြားမှာ နေထိုင် စားစရိတ်ကတော့ နိုင်ငံပေါ်နဲ့ ကိုယ်နေချင်တဲ့ ပုံစံပေါ် မူတည်ပြီး ကွဲပြားပါတယ်။ ကျွန်မ သိသလောက် ဂျပန်နဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံမှာ ရနိုင်တဲ့ ၀င်ငွေ ရေးပြပါမယ်။ စွဲမှတ်ထားရမှာကတော့ ဘယ်နိုင်ငံကြီးမှာ နေနေ ကိုယ်လုပ်ရတဲ့ လုပ်ခဟာ နေ၊ စားစရိတ်နဲ့ အနည်းဆုံး ကာမိတယ် ဆိုတာပါပဲ။ (မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား အကြောင်းတော့ ကျွန်မ သိပ်မသိပါ)။
ဂျပန်မှာ သာမန် အောက်ခြေသိမ်း အလုပ်တွေက ယန်း ၇၀၀/ တနာရီ က စပါတယ်။ စက်ရုံလို ဟာမျိုးမှာဆိုရင် တနာရီ ယန်း ၁၂၀၀-၁၅၀၀ အထိ ရနိုင်ပါတယ်။ မြို့ကြီးပေါ်မှာ နေတာကတော့ တိုက်ခန်း တခန်းကို ယန်း သိန်းကျော် ပေးရပြီး အားလုံး စုနေ၊ စုပေးတာမို့ တလ ယန်း ၃ သောင်း-၅သောင်း ကုန်ပါတယ်။ စားတာက ချွေတာစားရင် တလ ယန်း ၂သောင်း-၃သောင်း ကုန်ပါတယ်။ ပျှမ်းမျှ ယန်း၁၀၀=တဒေါ်လာ နဲ့ တွက်ပါ။
ကျောင်းတက်ရင် ကျောင်းလခက နှစ်ဝက်ကို ယန်း ၃ သိန်းက ၆ သိန်းအထိ ယူတဲ့ Course အပေါ် မူတည်ပါတယ်။
အမေရိကန်မှာ နေရင်တော့ နေတဲ့ ပြည်နယ်အပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ လစာ နည်းနည်း ကွာပါတယ်။ ဥပမာ New York မှာ တနာရီ ၁၀ဒေါ်လာ ရတဲ့ အလုပ်ဟာ နယ်မြို့တွေမှာ ဒီနှုန်းပြန်ရဖို့ ခက်ပါတယ်။ New York ရဲ့ အလုပ်သမား ဌာနက သတ်မှတ်ထားတဲ့ အလုပ်သမားတွေရဲ့ အနိမ့်ဆုံး လစာက တနာရီကို 7.5$ ပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ တချို့ ပြည်နယ်တွေက အဲဒီထက် နိမ့်ပါတယ်။
မြန်မာ တော်တော်များများက အင်္ဂလိပ်စကား မတတ်ရင်တော့ Laundry အ၀တ်လျှော်ဆိုင်မှာ၊ စတိုးဆိုင်မှာ နောက်ဖက်က ပစ္စည်းဖြည့်တာ၊ ပစ္စည်းပို့တာတွေ လုပ်လို့ရပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေက နီးစပ်ရာ ကလေးထိန်းတာ တနာရီကို ၁၂ ဒေါ်လာအထိ ရပြီး ပျှမ်းမျှက တပတ်ကို ဒေါ်လာ (၂၅၀) လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါတွေက အလုပ်လုပ်ခွင့် ပါမစ် ရှိရှိ မရှိရှိ လုပ်နိုင်တာမျိုးကို ပြောတာပါ။
New York မှာတော့ ကျောက်တန်းလို့ ခေါ်တဲ့ Jewelry ကုမ္ပဏီတွေမှာကတော့ အင်္ဂလိပ်စာ နည်းနည်း နားလည်တဲ့ လူဆိုရင်တော့ ရုံးအလုပ်လိုမျိုး (သို့) ကျောက်ရွေးတာမျိုးကို တပတ် ဒေါ်လာ ၃၀၀-၅၅၀ အထိ ပေးပါတယ်။ ဒီလို ကုမ္ပဏီတွေက သူဌေးတွေက သိပ်စည်းကမ်း မရှိဘဲ သူတို့စားပြီးသား ပန်းကန် ဆေးခိုင်းတာ၊ လက်ဖက်ရည် ကော်ဖီကို Microwave ထဲ သွားနွှေးခိုင်းတာ၊ စားပွဲကို ရှင်းခိုင်းတာ၊ ထမင်းပွဲ ပြင်ခိုင်းတာ၊ အမှိုက်ကြုံးတာ ခိုင်းပါတယ်။
အဲ… ကောင်းတဲ့ အလုပ် ဆိုတာကတော့ အင်္ဂလိပ်စာ နိုင်နိုင်နင်းနင်း ပြောနိုင်ပြီဆိုရင် စာတိုက်မှာဆို တနာရီ ၁၅-၁၆ ဒေါ်လာက စပါတယ်။ Daily Store မှာ Cashier ကတော့ ၁၀-၁၄ ဒေါ်လာ ရှိပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင် Waitress အလုပ်က တလကို နှစ်ထောင် ဒေါ်လာဝင်တယ် ပြောပါတယ်။
သိပ်ကောင်းတဲ့ အလုပ်မဟုတ်ပေမယ့် ကုမ္ပဏီရုံးတွေမှာ Data outers လို ဘာလိုမျိုးကတော့ တနှစ် ၃ သောင်းလောက် ရကြပါတယ်။ အဲ… ဆရာဝန်၊ အင်ဂျင်နီယာ တွေက အမေရိကန် လိုင်စင်ရပြီးရင်တော့ တနှစ်ကို ဒေါ်လာ သိန်းနဲ့ချီ ၀င်ပါတယ်။
ဂျပန်မှာလဲ အလုပ်ကောင်းရင် (ဟိုမှာ ကျောင်းပြီးပြီး) တလကို ယန်း ၂-သိန်းခွဲက ၅-၆သိန်း အထိ ရပါတယ်။ ဂျပန်က အလုပ်တွေက အလုပ်ကနေ အိမ်ငှား၊ နေစရိတ် ထုတ်ပေးတာမို့ အမေရိကားထက် ၀င်ငွေ ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Language ကြောင့် လူနည်းစုပဲ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အမေရိကားမှာ နေစရိတ်ကတော့ New York မှာ Studio ဆိုတဲ့ အခန်းတောင်မှ တလ ထောင်နား ကပ်နေပါတယ်။ တချို့ မြန်မာတွေက အိမ်ဝယ်ပြီးတော့ အခန်းငှားစားတော့ ၁၀ပေ ပတ်လည် အခန်း တခန်းကို ဒေါ်လာ ၅၀၀-၆၀၀ ရှိပါတယ်။ စားစရိတ်က တလကို ဒေါ်လာ ၂၀၀-၃၀၀ နဲ့ ရထားစီးခ ဒေါ်လာ ၁၀၀ ၀န်းကျင်မှာ ရှိပါတယ်။ သိပ်ရေးရင် ရှည်မှာ စိုးတာနဲ့ ဒီလောက်နဲ့ တော်ပါရစေ။
၈။ နိုင်ငံခြား သွားမယ် ဆိုရင် အသေအချာ ပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာ- ဂျပန်သွားမယ်ဆိုရင် ဂျပန်စကားကို လက်လှမ်းမီသလောက် သင်ထားပါ။ ဂျပန်လူမျိုး အကျင့်စရိုက်၊ လူနေမှု အခြေအနေ မေးမြန်း စုံစမ်းထားပါ။
တခြားနိုင်ငံတွေ သွားမယ်ဆိုရင် အဓိက အင်္ဂလိပ်စကားကို သင်ပါ။ ပြောနိုင်ဆိုနိုင်အောင် ကျင့်ပါ။ မြန်မာစကားဟာ မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်က ထွက်တာနဲ့ အသုံးမကျတော့ဘူး ဆိုတာကို စွဲနေအောင် မှတ်ထားဖို့ပါပဲ။ စီးပွားရေး လုပ်ဖို့ ထွက်မယ်ဆိုတာကတော့ ကျွန်မ သိပ်နားမလည်လို့ မရေးပြတော့ပါဘူး။
မေးခွန်းကို စေ့အောင် ဖြေပြီးပါပြီ။ အသေးစိတ် ထပ်မံ သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ mmyomyint@yahoo.com ကို Email ပို့ပါ။ ကျွန်မ Computer မှာ မြန်မာ Font မရှိတော့ အင်္ဂလိပ်လို ကြိုးစား ရိုက်စေချင်ပါတယ်။ ဒါမှ မဟုတ် မြန်မာလို စာရွက်မှာရေး၊ Scan ကူး၊ Attach လုပ် ပို့နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မလဲ ဖြေရင် ဒီလိုပဲ ဖြေမှာပါပဲ။
ဒီစာလေးက နိုင်ငံခြား သွားချင်သူတွေအတွက် အနည်းအကျဉ်းမျှ အထောက်အကူပြုမယ်ဆိုရင် ကျေနပ်ပါပြီ။
အထက်ပါပို့စ်ကို တင်ပြီး ၂ ရက်အကြာမှာ မမာလာရဲ့ စာတစောင် ထပ်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ သူ ပထမ ပေးပို့လိုက်တဲ့ စာထဲက အချက်အလက်မှားတခုကို မသီတာရဲ့ ထောက်ပြချက်အရ ပြန်လည် တွေ့ရှိမိလို့ ပြန်ပြင်ပေးစေချင်တဲ့စာပါ။ မူရင်းအတိုင်းပဲ ကူးယူတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ အလုပ်များနေလို့ တင်ပေးဖို့ တရက် နောက်ကျသွားတာ ခွင့်လွှတ်ပါ မမာလာရေ…။
Blogger ထဲပါ ထည့်ထားတဲ့အတွက်၊ ကျွန်မရဲ့ သိတာလေးတွေ ဝေမျှခွင့် ရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှ ကျွန်မ ပြန်ကြည့်မိတော့ Thyda ရဲ့ Comment ထဲမှာ ဂျပန်ကို Scholarship မပေးတော့ဘူး ဆိုတာ မြင်ရတော့မှ ကျွန်မ ရေးထားတာကို ပြန်ကြည့်မိတော့မှ ကျွန်မ လောကြီးပြီး (အမေရိကန်) ဆိုလိုတဲ့ နေရာမှာ ဂျပန် လို့ ရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်မ မူရင်းစာ Page2အပိုဒ် (၂) `ဂျပန် နိုင်ငံက ပေးတဲ့ အစိုးရ Scholarship ကတော့ ပေးတဲ့ နိုင်ငံအထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံ မပါပါ´ ဆိုတဲ့ စာကြောင်းပါ။ ကျွန်မရဲ့ ဆိုလိုရင်းက `ဂျပန်နိုင်ငံက ပေးတဲ့ Scholarship အတိုင်း ကောင်းတဲ့ ထောက်ပံ့မှုမျိုးကတော့ အမေရိကန် နိုင်ငံက ပေးပေမဲ့ ပေးတဲ့ နိုင်ငံထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံ မပါပါ´။ လောကြီးပြီး အပြည့်အစုံ မရေးဘဲ ထပ်စစ်ဆေးတော့မှ သာမန် လျှံဖတ်မိတဲ့ ကျွန်မရဲ့ အမှားပါ။
ကျေးဇူးပြုပြီး အဲဒီစာကြောင်းကို မူရင်းရဲ့ ဘေးမှာ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ စာကြောင်းကို စာရေးသူ အမှား ပြင်ဆင်ချက် ဆိုတာနဲ့ ပြင်ပေးစေချင်ပါတယ်။ Thyda ပြောသလို Information အမှားကို သူများကို ပေးသလို ဖြစ်မှာမို့ ကျွန်မ အရမ်းစိုးရိမ်သွားပါတယ်။ ကျွန်မမှာ Information အမှားကို သူများကို ပေးဝေချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ် လုံးဝမရှိဘဲ ကျွန်မရဲ့ အတွေ့အကြုံ ဗဟုသုတကိုသာ ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်မရဲ့ အမှားကို ပြင်ဆင်ပေးစေလိုပါတယ်။
Posted by ကလိုစေးထူး at 8:48 PM 11 comments